Ny mponina wiyot dia ponina teratany ny amerika niaina tany a Kalifôrnia mandidinani helondranohoni Humboldt efa nisy 8.000 taona izay. 500 izao ny isa ny mponina izao any ao avaratrani kalifôrnia ; io isa io dia ambanini isany. Misy olokafa 350 no voasoratranarana any anTable Bluffs ; fikambanana namboariny taminy taona 2000. Ny Wiyot dia nijaly tamini herisetrani amerikana taminy taona 1850 sy 1860 ; taminy andronio, maro dia maro ny olona tsy maintsy mandositra satria be dia be ny olona maty ; Io teny io dia voateny hoe "maty" taminy fahafatesanilay olona mpiteny farany anizio, Della Pr ...
Ny Voay dia biby mandady izay miaina anaty rano amin ny faritra trôpikaly any Afrika, Azia, Amerika ary Aostralia. Crocodylinae no anarany ana-tsiansa.
Ny Baolina kitra dia fanatanjahantena mampitohitra ekipa roa misy mpilalao 11 isany avy ao anaty kianka. Ny tanjonny ekipa iray dia mametraka baolina boribory ao anatinny zava-kendrehina any aminny sahanny ekipa iray, tsy mampiasa tanana, ary matetika kokoa nohonny ekipa iray hafa. Ny baolina kitra dia voakaodinny britanika taminny faranny taonjato faha 19, nanangana federasiôna iraisam-pirenena izy, ny FIFA taminny 1904. Taminny 2006, olona 264 tapitrisa eo ho eo ny isanny mpilalao baolina kitra manerana ny tany, ary izy no fanatanjahantena voalohany ao aminny ankabeazanny firenena. Ny ka ...
Ny sakaibe dia zavamaniry karazana sakay maniry isan-taona avy any Amerika Atsimo, tsy mafana loatra, izay misy voany miloko maitso na mavo na mena arakaraka ny fahamasahany, atao legioma. Mety mahatratra iray metatra ny sakaibe maniry. Lehibe sy malemy ny raviny. Kely sy miloko fotsy ny voniny. Misy otrikaina C ny vozany. Any amin ny faritra manana toetany antonony mafana no tena anirian ny sakaibe. Maro karazana ny sakaibe ka miovaova arakaraka izany ny endriky ny voany. Ao amin ny fianakavian-javamaniry Solanacea ny sakaibe izay atao amin ny anarana ara-tsiansa hoe Capsicum annuum.
Ny fanjakana Inka, fantatra ihany koa aminny anarana hoe ny Fanjakana Inka, no fanjakana lehibe indrindra tany Amerika talohanny Kolumbiana. Ny foibem-pitantanana, politika ary miaramila ao aminny empira dia tao an-tanànani Cusco. Ny sivilizasiona Inka dia nipoitra avy any aminny havoana peroviana taminny fiandohanny taonjato faha-13. Ny tanàna mimanda farany dia resinny Espaniola taminny 1572.
I Môrônia, araka ny Bokin i Môrmôna, dia mpaminany nefita farany, mpahay tantara, sady mpibaiko miaramila, izay niaina tany Amerika tamin ny faramparan ny taonjato faha-4 sy tamin ny fiandohanny taonjato faha-5. Taty aoriana dia izy no fantatra ho ny Anjely Môrônia, izay naneho ireo takela-bolamena tamin i Joseph Smith, izay nandika teny ireo takela-bolamena ireo ka nahazoana voalohany ny soratra ao amin ny Bokin i Môrmôna.
Ny dokotra fiompy dia karazan-dokotra ompiana avy aminny taranaka ganagana dia avy any Amerika. Mena ny hodi-dohany avy any aminny foto-bavany hatrany aminny vozony, indrindra ny anny lahy. Misy kambiny sahala aminny anny vorontsiloza ny eo amboninny orony, fa ny azy tsy mety mihalava. Rehefa masiaka izy na misy zavatra atahorany dia mitsanga ny volondohany. Tsy mamoaka feo firy ny lahy. Mety miseho aminny endrika maro ny volonity karazan-dokotra ity, ka misy ny fotsy, misy ny mainty, misy ny mena, misy ny mainty sy fotsy ary misy ny manga.
Ny valdisma na valdeisma na Fiangonana ara-pilazantsara valdesa dia Fiangonana lehibe indrindra nipoitra avy tamin ny toriteny nataon i Pierre Valdo. Io no fiangonana prôtestanta italiana voalohany izay hita indrindra ao Italia sy any Amerika Atsimo. Mikambana ao amin ny Fiombonan ny fiangonana nohavaozina era-tany sy ny amin ny Kônferansa prôtestanta any amin ny firenena latina ao Eorôpa io fiangonana io.
Ny soratra dia fomba fametrahana an-tsary ny feon ny fiteny iray, amin ny alalan ny endri-tsoratra soratana na natao sary, hahafahana mifanakalo fampahalalana haingana kokoa ary tsy mila feo. Manasaraka ny Fotoana Nialohanny Tantara sy ny Tantara ny taona namoronana ny soratra. Ny endri-tsoratra voalohany indrindra fantatra aminizao tontolo izao dia endri-tsoratra hieroglifika hita tany Abydos 400 km miala ao Le Caire eo amina vilany tany hita tanaty fasam-panjaka taloha. taminny taona -3400 ireo soratra ireo no nosoratana. Taona maromaro taty aoriana, mipoitra ny soratra miendrika fantsik ...
Lionel Messi dia mpilalao baolina kitra teratany argentina, teraka tao Rosaria Argentina taminny 24 Jona 1987, ary milalao ao aminny klioba FC Barcelona sy aminny ekipam-pirenena argentina. C´ le fill du Antón Romero Messi Heverina ho anisanireo mpilalao mahay indrindra teo aminny tantaranny baolina kitra izy satria izy irery ho hany mpilalao nahazo ny Ballon dOr efatra taona nifanesy, ny taona 2009 ka traminny 2012. Maro no zava-bita tsara indrindra vitani Lionel Messi: izy no nahafaty baolina be indrindra teo aminny fifaninanam-pirenena La Liga any Espana; izy no mpilalao nahafaty baolin ...
Loup A dia teny Amerindinina efa maty. Loup B teny Teny Algônkiana Teratanin ny Amerika Aljika
I Però dia firenena ao Amerika Atsimo. I Lima no renivohiny. Ny tanàna lehibe indrindra dia i Lima. 1, 285, 216 km2 ny velarantaniny ary 30, 475, 144 ny isan
I Kioba dia firenena ao Amerika Afovoany. Ny renivohiny dia Havana. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 109, 884 ny velarantaniny ary 11, 163